သူမရဲ့အမြင် နဲ့ ပက်သက် ပြီး အမျိုး ဘာသာ သာသနာကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း ကို မျှဝေရေးသားလာခဲ့တဲ့ ခင်သဇင်…. – Shwe Naung
မင်းသမီး ချောလေး ခင်သဇင် ကတော့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေပြီး ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက် တွေနဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အနုပညာ အရည်အချင်းတွေကြောင့် ပရိသတ် အားပေးလက်ခံမှုကို အပြည့်အ၀ ရရှိထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ခင်သဇင်က လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာလည်း ဖေဖော်ဝါရီလ အစတည်းကတိုင် ပရိသတ်တွေနဲ့ တစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ အရေးတော်ပုံ ကြီးအောင်မြင်ရေးအတွက် ကြိုးစားခဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်…..။
ခင်သဇင်က မကြာသေးမီက လည်းသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူမရဲ့အမြင်ကို ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။
“အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သာသနာပြု တယ်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးမ တရားတော်နဲ့ အညီ ကုသိုလ် ကောင်းမှုတွေ လုပ်တာဖြစ်တယ်.. ဘုရားကျောင်း ကန်ဆောက်တာ သာသနာ ပြုတာလို့ မခေါ်ဘူးတဲ့…
လူတွေက ဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေကို အကြောင်းပြု ပြီးအလုပ်တွေ ကြိုးစားခြင်းနဲ့ သာ ကျောင်းကန် ဆောက်လုပ်ပေးကြခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့… ဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ စကားတော်နဲ့ နေခြင်းသာ သာသနာ ပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့….။
သာသနာ ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ သာလျှင် ဖြစ်တယ်… (ယနေ့ နာဖြစ်သော တရားတော်မှ မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်) 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ရည်ညွှန်းတရားတော်- စေတနာ ကောင်းလျှင် ကံကောင်းမည်၊ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ။ 👉🏻👉🏻👉🏻အဲတော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ
ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက် ဘုန်းကြီးကို ရှိခိုးပြ နေတာတွေက သာသနာ ပြုတာ မဟုတ်ပါကြောင်း ..မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်နဲ့ မညီသော ကိစ္စရပ် တိုင်းဟာသာသနာ ကို ကာကွယ် နေတာ မဟုတ်ပါကြောင်း ယနေ့ နာယူ ဖြစ်သော တရားတော်မှ မျှဝေလိုက်ပါတယ် 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
အကုသိုလ်တွေ ရင်ထဲများ နေရင်တော့ ဆင်းရဲမှာ အမှန် ဖြစ်ပါတယ်…..” ဆိုပြီးရေးသားမျှ ဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
အခုကာလ လေ့ကျင့်ခန်း အပြင်းအထန်လုပ်နေတာ ကိုကိုရေ ဇောက်ထိုးကြီး’ ဆိုတဲ့ ‘နွယ်နွယ်ထွန်း’ရဲ့ အကြမ်းစားပုံရိပ်များ
ရင်ဖိုစရာ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ အထာကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ အယ်လာရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……….
ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အပြုံးများနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……